About Company Surfboard AOXJET Electrice
AOXJET ayaa samaynta nidaamyo propulsion korontada tan iyo 2015. Early on aan bixisey hababka propulsion korontada si noocyada kala duwan ee doonaya in ay abuuraan gaar ah alaabta isboortiga biyaha. Tani waxay noo siiyey waayo-aragnimo badan oo duurka ku hor waxaan go'aansaday inuu ku magacaabin waxyaabaha biyaha isboortiga gaar ah our. Waxaan awoodin in ay qaadan ayaan baranay oo dhan oo geli waxyaabaha our si ay u matalaan qiimaha ugu wanaagsan ee waxqabadka.
Our network geelaa qoto dheer ee warshadaha isboortiga biyaha ayaa sidoo kale awood inoo siineysaa in had iyo macluumaad gacanta ugu horeysay ee wax cusub iyo isbedelka cusub. Qeybiyaha core propulsion ugu horeeysa, waxaan leenahay xiriir iskaashi aad u dhow la leh isboortiga biyo badan oo kale oo wax soo saarka warshadaha iyo mudnaanta iibsato waxyaabaha ay kharash hooseeya ee suuragalka ah. Dhamaan badeecada aan ku qoran website-ka, waxaa ka mid ah kibir soo saaray AOXJET ama soo saaray by our-hawlgalayaasha si xeeladaysan loo doortay, iyadoo la wadaago goolka caadi asaasiga ah ee la abuurayo wax soo saarka isboortiga biyaha tayada iyo qiimaha bet ugu wanaagsan.
Dhamaan waxyaabaha AOXJET waxaa ka mid ah u sameeyey gurigii by AOXJET, ama ay wada-hawlgalayaashu ay iskaashi kuwaas oo la isticmaalayo nidaamka propulsion AOXJET ee. Tani waxay ina siinaysaa ma aha oo kaliya faa'iidooyinka qiimaha ugu fiican, laakiin sidoo kale si mudnaanta iyo isbedbedelka ugu fiican.
Lagu kalsoonaan karo Core Technology
Iyada oo sano cilmi-baarista iyo horumarinta, iyo imtixaanka in alaabooyin kala duwan our, nidaamyada propulsion our ka mid ah hababka ugu kalsoonaan karo in dunida oo dhan ay yihiin. Gaar ahaan noo gaar ah loogu talagalay ESC, ayaa si guul leh u soo dejinaysaa heerka khaldan in ay ka yar 0.5%, taas oo aad u yar yahay isboortiga biyo soo saarka korontada.
Guddiga customizable Qaab / Brand
Thanks to our waayo-aragnimo ee la soo dhaafay ee in-guriga soo saarka alaabta isboortiga biyaha iyo sidoo kale iskaashi la shirkadaha kala duwan ee qalabka biyaha oo kale, waxaana ka yeelay nidaamka propulsion in la aadka dhafan oo laga yaabaa in si fudud lagu rakibay gal muuqaalo guddiga kala duwan. Iyadoo xiriirka our ee silsiladda dhameystirtay sahayda ka samaynta warshadaha, si saarayaasha caaryada, in warshadaha qolof guddiga, waxaan kaliya u baahan tahay si aad fikrad ama sawiro si aad u caawini kartaa in aad leedahay aad u gaarka ah loogu talagalay Electric Surfboard ama jirka guddiga.
Kabay Price Sample
Waxaan nahay riyooda. Waxaan rabnaa in aan isboortiga biyaha in ay ka badan iyo in ka badan oo caan ah. Waxaan rabnaa in aan dad badan u leeyihiin fursad ay ku raaxaysan xiiso biyaha our hooyadiis dabiiciga ah la siiyo. Waxaan aaminsanahay si aad tahay. Waxaan aaminsan nahay in riyooyin badan oo dhan waxay leeyihiin bilow kuwa is-hoosaysiiya, sidaas darteed waxaan rabnaa in aan caqabad uu ku noqon karo yar intii suurto gal, waayo, dhammaan riyooda, kuwaas oo diyaar u yihiin inay ku lug in this isboortiga biyaha weyn u qaadida initiative. Beddelo nidaamka binta dhaqanka, waxa aan aadka u subsiding qiimaha saamiga our si ay u sameeyaan tijaabada in ay aad u raqiis ah si ay u noqon lahaayeen kuwa aad u fudud si aad u hesho mid ka mid ah oo ay tijaabiyaan at adiga kuu gaar ah. The qiimaha saamiga la taakuleeyo adag tahay oo keliya iibsada shirkad kuwaas oo ay qorsheynayaan in ay noqdaan our ganacsada / qaybiya. Sidaas edbinta shirkadda kooban ah ayaa loo baahan yaabaa in la xaq u for our qiimaha saamiga la taakuleeyo. iibsada Personal iibsan kartaa iibinaya qiimo.
Motor For Esurfing, Jet Electric Body Board Motor, Motor Surfboard, Water Board With The Motor, Surfboard Iyadoo Motor , Motorized Surfboard,